“Misaora an’i Jehovah fa tsara izy.”—SAL. 106:1.
Inona no ianarantsika momba ny fahaizana mankasitraka rehefa mandinika ny nataon’ny apostoly Paoly isika?
Nahoana ny fisaintsainana sy ny vavaka no manampy antsika hahay hankasitraka foana?
Nahoana no manampy antsika hiatrika olana ny fisaintsainana ny fitahiana ananantsika?
1. Nahoana i Jehovah no mendrika ny hisaorana?
TENA mendrika ny hisaorana i Jehovah, ilay Mpanome ny “fanomezana tsara rehetra sy ny fanomezana tonga lafatra rehetra.” (Jak. 1:17) Mpiandry be fitiavana izy ka mikarakara an’izay ilaintsika ara-batana sy ara-panahy. (Sal. 23:1-3) “Fialofana sy hery ho antsika” koa izy, indrindra amin’ny fotoam-pahoriana. (Sal. 46:1) Maro tokoa ny antony isaorantsika azy, toy ny nataon’ilay mpanao salamo izay nilaza hoe: “Misaora an’i Jehovah fa tsara izy, fa mandrakizay ny hatsaram-panahiny feno fitiavana.”—Sal. 106:1.
Andinin-teny ho an’ny taona 2015: “Misaora an’i Jehovah fa tsara izy.”—Salamo 106:1
2, 3. a) Inona no mety hitranga raha tsy miraharaha ny fitahiana ananantsika isika? b) Inona avy ny fanontaniana hodinihintsika?
2 Nahoana no mila dinihintsika raha mahay mankasitraka isika? Vao mainka tsy mahay misaotra ny olona amin’izao andro farany izao, araka ny faminaniana. (2 Tim. 3:2) Maro no tsy miraharaha ny zava-tsoa ananany. An-tapitrisany no voatarik’ity tontolo tia harena ity sy ny dokam-barotra, ka tsy afa-po amin’izay ananany fa te hahazo foana. Mety hifindra amintsika izany toe-tsaina izany. Mety ho lasa tsy mahay mankasitraka toy ny Israelita isika, ka tsy ho sarobidy amintsika intsony ny fifandraisana amin’i Jehovah sy ny fitahiany.—Sal. 106:7, 11-13.
3 Diniho koa izay mety hitranga rehefa manana olana lehibe isika. Mety ho variana loatra amin’izany isika, ka hanadino ny fitahiana ananantsika. (Sal. 116:3) Inona àry no hanampy antsika hahay hankasitraka foana? Inona no hanampy antsika hijery lafy tsaran-javatra foana, na misy fitsapana mafy aza? Handinika izany isika izao.
‘MARO NY ZAVATRA NATAONAO, JEHOVAH Ô’
4. Inona no hanampy antsika hahay hankasitraka foana?
4 Inona no hanampy antsika hahay hankasitraka foana? Mila manaiky isika fa mahazo ny fitahian’i Jehovah, ary mila misaintsaina sy mankasitraka azy ireny. Eritrereto tsara koa ny hatsaram-panahy feno fitiavana asehony. Nanao izany ny mpanao salamo ka niaiky fa maro be ny zavatra mahatalanjona nataon’i Jehovah.—Vakio ny Salamo 40:5; 107:43.
5. Inona no ianarantsika avy amin’izay nataon’ny apostoly Paoly?
5 Miana-javatra betsaka momba ny fahaizana mankasitraka isika rehefa mandinika ny nataon’ny apostoly Paoly. Nisaintsaina ny fitahiana azony izy matoa imbetsaka no nisaotra an’i Jehovah tamin’ny fo manontolo. Fantany tsara fa “mpanevateva an’Andriamanitra” izy taloha, sady “mpanenjika no mpanambany olona.” Velom-pisaorana àry izy satria namindra fo taminy Andriamanitra sy Kristy ka nanendry azy hanao fanompoana, na dia teo aza ny ratsy nataony. (Vakio ny 1 Timoty 1:12-14.) Tena nankasitraka an’ireo mpiray finoana taminy i Paoly. Matetika izy no nisaotra an’i Jehovah noho ny toetra tsaran’izy ireo sy izay nataon’izy ireo noho ny finoany. (Fil. 1:3-5, 7; 1 Tes. 1:2, 3) Tonga dia nisaotra an’i Jehovah koa izy rehefa nisy rahalahy nanampy azy, tamin’izy tojo zava-tsarotra. (Asa. 28:15; 2 Kor. 7:5-7) Tsy mahagaga raha nampirisika ny Kristianina izy hoe: “Asehoy fa mahay mankasitraka ianareo. ... Mifananara mandrakariva amin’ny salamo sy ny fiderana an’Andriamanitra ary ny hira mahafinaritra momba an’Andriamanitra.”—Kol. 3:15-17.
ILAINA NY VAVAKA SY NY FISAINTSAINANA
6. Inona no tena isaoranao an’i Jehovah?
6 Inona no hanampy anao hahay hankasitraka toa an’i Paoly? Saintsaino izay efa nataon’i Jehovah ho anao. (Sal. 116:12) Ahoana raha anontaniana ianao hoe inona avy ny fitahiana tianao hisaorana azy. Hamaly ve ianao hoe ny fifandraisanao aminy, izay tena sarobidy? Sa ny famelany ny helokao noho ianao mino ny sorom-panavotan’i Kristy? Hotononinao ve ny anaran’ireo rahalahy sy anabavy nanohana anao tao anatin’ny sarotra? Azo antoka fa tsy hohadinoinao koa ny vady malalanao sy ny zanakao. Ho feno fankasitrahana ny fonao ka hisaotra an’i Jehovah isan’andro ianao, raha maka fotoana isaintsainana an’ireny fitahiana omen’ilay Raintsika be fitiavana ireny.—Vakio ny Salamo 92:1, 2.
7. a) Nahoana isika no tokony hisaotra rehefa mivavaka? b) Inona no soa horaisinao raha misaotra ianao rehefa mivavaka?
7 Ho vonona hivavaka amin’i Jehovah sy hisaotra azy isika, raha ataontsika an-tsaina sy raketintsika ao am-po ireo fitahiana ananantsika. (Sal. 95:2; 100:4, 5) Maro no tsy mivavaka raha tsy hangataka zavatra. Faly anefa i Jehovah rehefa misaotra azy noho izay ananantsika isika. Misy vavaka fisaorana maro manohina ny fo ao amin’ny Baiboly, toy ny vavak’i Hana sy Hezekia. (1 Sam. 2:1-10; Isaia 38:9-20) Tahafo àry ireny olona nahay nankasitraka ireny. Isaory an’i Jehovah ny fitahiana anananao, rehefa mivavaka ianao. (1 Tes. 5:17, 18) Maro ny soa horaisinao amin’izany. Hampahery anao izany ary hahatonga anao ho tia kokoa an’i Jehovah sy ho akaiky kokoa azy.—Jak. 4:8.
Inona avy ny fitahian’i Jehovah tianao hisaorana azy? (Fehintsoratra 6, 7)
8. Inona no mety hahatonga antsika tsy hankasitraka an’izay rehetra nomen’i Jehovah?
8 Tokony ho mailo foana isika sao ho lasa tsy mankasitraka ny fitahian’i Jehovah. Nandova ota mantsy isika ka mora tsy mankasitraka. Napetraka tao amin’ny paradisa iray, ohatra, i Adama sy Eva razambentsika. Nanana an’izay nilainy izy ireo ary afaka niadana mandrakizay. (Gen. 1:28) Tsy nankasitraka an’izany anefa izy ireo fa mbola nitady zavatra hafa. Nafoiny àry ny zava-drehetra. (Gen. 3:6, 7, 17-19) Mety hanadino izay rehetra nataon’i Jehovah ho antsika koa isika, satria ny tontolo misy antsika tsy mahay mankasitraka. Mety hanjary tsy hiraharaha ny fifandraisantsika aminy, ohatra, isika, na tsy hankasitraka intsony an’ilay tombontsoa hoe anisan’ny fianakavian’ny mpirahalahy maneran-tany. Mety ho lasa variana amin’ny zavatra atolotr’ity tontolo efa ho rava ity isika. (1 Jaona 2:15-17) Hisoroka an’izany isika raha misaintsaina ny fitahiana ananantsika sy misaotra an’i Jehovah foana noho ny tombontsoa manompo azy.—Vakio ny Salamo 27:4.
AHOANA REHEFA MISY OLANA?
9. Nahoana isika no mila misaintsaina ny fitahiana ananantsika rehefa miatrika fitsapana mafy?
9 Hahay hiatrika fitsapana mafy isika raha mahay mankasitraka. Tena manova ny fiainana ary mila tsy ho zaka ny olana sasany miseho tampoka, ohatra hoe vady manitsakitsaka, aretina mety hahafaty, fahafatesan’ny havan-tiana, na fahavoazana vokatry ny hetraketraky ny natiora. Mila misaintsaina ny fitahiana ananantsika isika rehefa tojo olana toy ireny, mba hahery sy hatanja-tsaina. Diniho ireto zavatra tena misy ireto.
10. Nahoana no mahasoa an’i Irina ny misaintsaina ny fitahiana ananany?
10 Mpisava lalana maharitra any Etazonia i Irina. * Anti-panahy ny vadiny nefa nanitsakitsaka azy ary nandao azy sy ny zanany. Inona no nanampy azy hanompo an’i Jehovah foana? Hoy izy: “Misaotra an’i Jehovah aho noho izy mikarakara ahy. Saintsainiko isan’andro ny fitahiana ananako, ka hitako fa tombontsoa be ny hoe fantatr’ilay Raintsika any an-danitra sy tiany ary arovany. Matoky aho fa tsy hahafoy ahy mihitsy izy.” Maro ny fahorian’i Irina nefa falifaly foana izy. Manampy azy tsy ho kivy izany sady mampahery ny hafa.
11. Inona no manampy an’i Kyung-sook hiatrika aretina mahafaty?
11 Mpisava lalana nandritra ny 20 taona mahery i Kyung-sook sy ny vadiny, any Azia. Tampoka teo dia hita fa voan’ny kanseran’ny havokavoka izy, sady efa mihombo be ilay aretina. Nilazana izy fa telo na enim-bolana sisa no ho velona. Efa maro ny olana lehibe sy kely natrehin’izy mivady, saingy mbola tsy nampanahy azy ireo ny fahasalamany. Hoy i Kyung-sook: “Voadona be aho rehefa nahalala hoe marary. Nihorohoro aho satria hoatran’ny hoe namoy ny zava-drehetra.” Inona no manampy azy? Hoy izy: “Mankany an-tampon-tranonay aho isak’alina alohan’ny hatory. Misaotra an’i Jehovah amin’ny feo avo aho noho ny zavatra dimy nahafinaritra ahy tamin’ilay andro. Milamindamina ny saiko avy eo ka te hilaza amin’i Jehovah aho fa tia azy.” Inona ny soa raisiny amin’izany? Hoy ihany izy: “Lasa tsapako fa manohana antsika i Jehovah rehefa miatrika fotoan-tsarotra isika, ary tsapako koa hoe be lavitra noho ny olana mitranga ny fitahiana azontsika.”
Miaraka amin’i John anadahiny, izay tsy maty tamin’ilay loza (Fehintsoratra 13)
12. Inona no mampahery an’i Jason na maty vady aza izy?
12 Manompo ao amin’ny biraon’ny sampana iray atsy Afrika i Jason. Efa 30 taona mahery izy izao no nanompo manontolo andro. Hoy izy: “Matin’ny kansera ny vadiko fito taona lasa izay, ary tena mafy ilay izy. Kivy be aho rehefa mieritreritra ny nahazo azy tamin’izy niady tamin’ilay izy.” Inona no manampy an’i Jason? Hoy izy: “Nahatsiaro ny fotoana mahafinaritra iray niarahanay mivady aho indray mandeha, dia nisaotra an’i Jehovah noho izany. Nahatsiaro ho maivamaivana aho ka nanomboka teo dia nisaotra azy matetika noho ireny fahatsiarovana mamy ireny. Niova be ny fahitako ny fiainana rehefa nahay nankasitraka aho. Marina fa mbola malahelo ny vadiko aho. Niova anefa ny fisainako rehefa nisaotra an’i Jehovah aho noho izaho nanana tokantrano sambatra sy afaka nanompo azy niaraka tamin’ny olona iray tena tia azy.”
“Misaotra an’i Jehovah aho satria manana azy ho Andriamanitro.”—Sheryl
13. Nahoana i Sheryl no tsy kivy na dia namoy ny ankamaroan’ny mpianakaviny aza?
13 Nisy rivo-doza mahery atao hoe Haiyan tany Philippines afovoany, tamin’ny faramparan’ny 2013. Vao 13 taona i Sheryl tamin’izay ary saika ny zava-drehetra no nafoiny. Hoy izy: “Rava ny tranonay ary maty ny ankamaroan’ny mpianakaviko.” Maty tamin’ilay loza ny dada sy mamany ary ny iray tam-po aminy telo. Inona no nanampy azy tsy hamoy fo? Mahay mankasitraka izy ary mitadidy foana ny fitahiana mbola ananany. Hoy izy: “Hitako fa nanampy sy nampahery ny hafa ireo ranadahy sy rahavavy. Fantatro koa fa nivavaka ho ahy ny mpiara-manompo maneran-tany.” Hoy koa izy: “Misaotra an’i Jehovah aho satria manana azy ho Andriamanitro. Manome izay ilaintsika foana izy.” Manampy antsika tsy ho resin’ny alahelo tokoa ny fitadidiana an’ireo fitahiana ananantsika. Raha mahay mankasitraka isika, dia hahavita hiaritra an’izay rehetra mampahory antsika.—Efes. 5:20; vakio ny Filipianina 4:6, 7.
‘HIFALY AMIN’I JEHOVAH AHO’
14. Inona no zavatra mahafinaritra antenaintsika? (Jereo ny sary eo am-piandohan’ny lahatsoratra.)
14 Nifaly tamin’ny fitahian’i Jehovah foana ny mpanompony hatramin’izay. Faly be, ohatra, ny Israelita rehefa avy nafahana tamin’i Farao sy ny tafiny teo amin’ny Ranomasina Mena. Nidera sy nisaotra an’i Jehovah an-kira izy ireo. (Eks. 15:1-21) Anisan’ny fitahiana sarobidy indrindra amintsika koa ilay fanantenana azo antoka hoe hafahana amin’izay rehetra mampahory antsika isika. (Sal. 37:9-11; Isaia 25:8; 33:24) Alao sary an-tsaina izay ho tsapantsika rehefa horinganin’i Jehovah ny fahavalony rehetra ka handray antsika ao amin’ny tontolo vaovao anjakan’ny fiadanana sy fahamarinana izy. Tena hisaotra azy isika amin’izay!—Apok. 20:1-3; 21:3, 4.
15. Tapa-kevitra hanao inona ianao mandritra ny taona 2015?
15 Miandrandra fitahiana maro avy amin’i Jehovah isika amin’ity taona ity. Mety hisy ny zava-tsarotra, nefa fantatsika fa tsy handao antsika mihitsy i Jehovah, na inona na inona mitranga. (Deot. 31:8; Sal. 9:9, 10) Homeny antsika foana izay rehetra ilaintsika mba tsy hivadihana aminy. Tahafo foana àry ny toe-tsain’i Habakoka mpaminany. Hoy izy: “Na tsy mamony aza ny aviavy, ary tsy mamoa ny voaloboka, ary na tsy ahitam-bokatra aza ny oliva, ary tsy mahavokatra zavatra hohanina ny tanimboly mikitohatohatra, ary na tsy misy ondry intsony aza ao am-bala, ary tsy misy omby ao am-pahitra, dia mbola hifaly amin’i Jehovah ihany aho, sy hiravoravo amin’ilay Andriamanitry ny famonjena ahy.” (Hab. 3:17, 18) Enga anie isika mandritra an’ity taona ity ka hisaintsaina ny fitahiana ananantsika, ary hampihatra ny andinin-teny ho an’ny taona 2015 hoe: “Misaora an’i Jehovah fa tsara izy.”—Sal. 106:1.
Nahoana ny Kristianina no tokony hivavaka foana? Iza no mandray soa rehefa mivavaka ho an’ny hafa ianao?
Hizara Hizara Misaora An’i Jehovah dia Hotahiny Ianao